Find Fananan-trano hofaina ao Islamabad, Islamabad Capital amin'ny Realtyww Info
Ity G-11 ity dia be voninahitra noho izy manana ny sasany amin'ny toetra tsara indrindra. Manentana anao mafy izahay handinika ity tolotra ity. Ity fananana amin'ny 3000 Rs ity no ilainao hanombohana fiainana tsaratsara kokoa! Miaina am-pilaminana sy ahazoana aina miaraka amin'ity trano ity. Ny trano tadiavinao dia haofana. Aza adino ity vintana ity. Io trano 5 Marla manana habe io dia tena mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Raiso ny fotoana hanananao ny tranonao ao amin'ny G-11 miaraka amin'ny safidy trano mora azo. Raha mitady fampahalalana bebe kokoa ianao dia aza misalasala mifandray.